ရွှေစိတ်ပျော်စေမယ့် သစ်သီးစုံသုပ်မွှေးမွှေးလေးကို အိမ်မှာ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ? -
ရွှေစိတ်ပျော်စေမယ့် သစ်သီးစုံသုပ်မွှေးမွှေးလေးကို အိမ်မှာ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ?
Posted on December 14, 2018 December 14, 2018 Author Khaine Zar Lin	Comment(0)
အိုက်စ်… သွားရည်ကျ.. 😀 😀
ယောင်းတို့ရေ.. ခုတလော မင်းသမီးချောချောလေးတစ်ယောက် ရောင်းတဲ့ ရွှေစိတ်ပျော်သုပ်ဆိုတာလေး နာမည်ကြီးနေတာ ကြားမိကြလားဟင်?
ရွှေစိတ်ပျော်သုပ်တဲ့ နာမည်လေးက လှလှဆန်းဆန်းလေးရယ်.. ဒါလေးစားလိုက်ရင် အိပ်ချင်လည်းပြေ၊ ရှုပ်နေတဲ့ စိတ်တွေပါ ပျော်သွားစေနိုင်လို့ ဒီနာမည်လေး ပေးတာပါတဲ့။
တကယ်တော့ ရွှေစိတ်ပျော်သုပ်ဆိုတာ သစ်သီးခြောက်နဲ့ သစ်သီးယိုလေးတွေကို ချဉ်ငံစပ်စတိုင်လ် သုပ်ထားတာလေးပါ။ အရသာလေးက ချဉ်ငံစပ် မွှေးမွှေးလေးဆိုတော့ ယောင်းတို့ ကြိုက်မှာ အသေချာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ခိုင်ဇာက ရွှေစိတ်ပျော်စေတဲ့ ရွှေစိတ်ပျော်သုပ်လေးကို အိမ်မှာ သုပ်စားလို့ရအောင် နည်းလမ်းလေး ပြောပြမယ်လေ။
Related Article >>> လှလည်းလှစားလို့လည်းကောင်းတဲ့ ပန်းရောင်စုံ အသုပ်
ဒီအသီးသုပ်လေးကို လုပ်စားမယ်ဆိုရင် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်း ရိုးရှင်းပြီးတော့ အချိန်ခဏလေးနဲ့ ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ အဓိကလိုအပ်တာကတော့ သစ်သီးယိုစုံလေးတွေ၊ သစ်သီးခြောက်လေးတွေပါ။ တကယ်လို့ ယောင်းအနေနဲ့ သစ်သီးယို မသုံးချင်ဘူးဆိုလည်း သစ်သီး အစစ်လေးတွေနဲ့ သုပ်စားလို့ရပါတယ်။ ဒါဆို စကြည့်ကြရအောင်နော်…
၁။ သစ်သီးယိုစုံ (သို့) သစ်သီးစုံ
Related Article >>> နံပြားပီဇာ သို့မဟုတ် ငပျင်းပီဇာလုပ်နည်း
သစ်သီးယိုစုံလေးတွေကို ပန်းကန်ထဲထည့်ပါ။ အလုံးကြီးပြီး အစေ့ပါတဲ့ မက်မန်းသီးနဲ့ သံပုရာသီးကို ပါးပါးလှီးပါ။ ယိုမသုံးဘဲ သစ်သီးပဲ သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း သစ်သီးမျိုးစုံကို အတုံးသေးသေးလေးတွေ တုံးတာမျိုး၊ ပါးပါးလေးလွှာထားတာမျိုး လုပ်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ငံပြာရည်အနည်းငယ်၊ သံပုရာရည်အနည်းငယ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့် (စပ်စပ်လေးစားမယ်ဆိုရင်တော့ များများထည့်ပေါ့နော်) ၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်အနည်းငယ် ထည့်ပြီး နယ်လိုက်ရုံပါပဲ။ သစ်သီးလေးတွေနဲ့ သုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သကြားနည်းနည်းလေးထည့်ပါနော်။
လုပ်နည်းလေးက လွယ်တယ်နော် ယောင်းရေ။ ရွှေစိတ်ပျော်မပျော်တော့ မသိဘူး အခုရေးရင်းတောင် စားချင်လာပြီရယ်။ အိမ်မှာ လုပ်စားကြည့်နော်။ ပြီးရင် ပြန်ပြောပြပါဦး ယောင်းရေ။
အိုကျဈ… သှားရညျကြ.. 😀 😀
ယောငျးတို့ရေ.. ခုတလော မငျးသမီးခြောခြောလေးတဈယောကျ ရောငျးတဲ့ ရှစေိတျပြျောသုပျဆိုတာလေး နာမညျကွီးနတော ကွားမိကွလားဟငျ?
ရှစေိတျပြျောသုပျတဲ့ နာမညျလေးက လှလှဆနျးဆနျးလေးရယျ.. ဒါလေးစားလိုကျရငျ အိပျခငျြလညျးပွေ၊ ရှုပျနတေဲ့ စိတျတှပေါ ပြျောသှားစနေိုငျလို့ ဒီနာမညျလေး ပေးတာပါတဲ့။
တကယျတော့ ရှစေိတျပြျောသုပျဆိုတာ သဈသီးခွောကျနဲ့ သဈသီးယိုလေးတှကေို ခဉျြငံစပျစတိုငျလျ သုပျထားတာလေးပါ။ အရသာလေးက ခဉျြငံစပျ မှေးမှေးလေးဆိုတော့ ယောငျးတို့ ကွိုကျမှာ အသခြောပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ခိုငျဇာက ရှစေိတျပြျောစတေဲ့ ရှစေိတျပြျောသုပျလေးကို အိမျမှာ သုပျစားလို့ရအောငျ နညျးလမျးလေး ပွောပွမယျလေ။
Related Article >>> လှလညျးလှစားလို့လညျးကောငျးတဲ့ ပနျးရောငျစုံ အသုပျ
ဒီအသီးသုပျလေးကို လုပျစားမယျဆိုရငျ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေလညျး ရိုးရှငျးပွီးတော့ အခြိနျခဏလေးနဲ့ ပွငျဆငျလို့ရပါတယျ။ အဓိကလိုအပျတာကတော့ သဈသီးယိုစုံလေးတှေ၊ သဈသီးခွောကျလေးတှပေါ။ တကယျလို့ ယောငျးအနနေဲ့ သဈသီးယို မသုံးခငျြဘူးဆိုလညျး သဈသီး အစဈလေးတှနေဲ့ သုပျစားလို့ရပါတယျ။ ဒါဆို စကွညျ့ကွရအောငျနျော…
၁။ သဈသီးယိုစုံ (သို့) သဈသီးစုံ
Related Article >>> နံပွားပီဇာ သို့မဟုတျ ငပငျြးပီဇာလုပျနညျး
သဈသီးယိုစုံလေးတှကေို ပနျးကနျထဲထညျ့ပါ။ အလုံးကွီးပွီး အစပေ့ါတဲ့ မကျမနျးသီးနဲ့ သံပုရာသီးကို ပါးပါးလှီးပါ။ ယိုမသုံးဘဲ သဈသီးပဲ သုံးမယျဆိုရငျလညျး သဈသီးမြိုးစုံကို အတုံးသေးသေးလေးတှေ တုံးတာမြိုး၊ ပါးပါးလေးလှာထားတာမြိုး လုပျပါ။
ပွီးရငျတော့ ငံပွာရညျအနညျးငယျ၊ သံပုရာရညျအနညျးငယျ၊ ငရုတျသီးမှုနျ့ (စပျစပျလေးစားမယျဆိုရငျတော့ မြားမြားထညျ့ပေါ့နျော) ၊ ပုစှနျခွောကျမှုနျ့အနညျးငယျ ထညျ့ပွီး နယျလိုကျရုံပါပဲ။ သဈသီးလေးတှနေဲ့ သုပျမယျဆိုရငျတော့ သကွားနညျးနညျးလေးထညျ့ပါနျော။
လုပျနညျးလေးက လှယျတယျနျော ယောငျးရေ။ ရှစေိတျပြျောမပြျောတော့ မသိဘူး အခုရေးရငျးတောငျ စားခငျြလာပွီရယျ။ အိမျမှာ လုပျစားကွညျ့နျော။ ပွီးရငျ ပွနျပွောပွပါဦး ယောငျးရေ။
Tagged Food, Fruit, Fruit jam, Jam, Recipes, salad
Khaine Zar Lin
စာဖတ်၊ စာရေးနဲ့ အစားအသောက် အရူးအမုူးကြိုက်တဲ့ စမ်းချောင်းသူလေးပါ။ ရေးသမျှ စာလေးတွေ ဖတ်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
Posted on January 28, 2019 January 28, 2019 Author Khaine Zar Lin
Posted on December 30, 2018 Author Khaine Zar Lin
နိုင်ငံအသီးအသီးရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အယူအဆတွေအရ..သူတို့ အတွက်ကံကောင်းစေတဲ့ အစားအစာတွေက ?
Posted on November 14, 2018 November 14, 2018 Author Khaine Zar Lin
ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ… အမှားလုပ်မိမှာကို မကြောက်စမ်းပါနဲ့!!!!
ဒီစာကိုဖတ်ပြီးရင်တော့ အလတ်ဖြစ်ရတာကို စိတ်ညစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး…